चैत १, २०७३ मगलवार १८:३५:०० प्रकाशित
बर्ड फ्लुको शंकामा गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणमा युरोपतिर देखिएको बर्ड फ्लुको नयाँ भाइरस एच५ एन८ रहेको पुष्टि भएको हो। नेपालमा नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएपछि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआई) ले र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले सतर्क रहन चेतावनी दिएका छन्।
नयाँ प्रजातिको भाइरसका कारण इटहरी र आसपासका क्षेत्रका चार हजारभन्दा बढी कुखुरा, हाँस लगायतका पंक्षीको मृत्यु भइसक्दा पनि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो विषयलाई गोप्य राखेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त क्षेत्रका अझै ६ हजारभन्दा बढी पंक्षीमा नयाँ भाइरले संक्रमण गरेको छ।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनले बर्ड फ्लुको नयाँ भाइरस देखिएको जानकारी आएकाले सतर्क रहन आग्रह गरे। उनले अहिले देखिएको नयाँ भाइरस पनि मानिसमा सर्ने खालको भएकाले सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्।
डा. पुनका अनुसार बर्ड फ्लु भनेको एभियन इन्फ्लुएन्जा टाइप ए नामक सूक्ष्म भाइरसका कारण्ँ लाग्ने प्राण्ँघातक रोग हो। यस प्रकारका भाइरसले अति छिट्टै आफ्नो वंशाणुगत स्वरुपमा परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता बोकेको हुन्छ। यस क्रममा शरीरका कोषसँग समायोजन भएर नयाँ किसिमका हानिकारक जीवाणू जन्मन्छ, जुन पंक्षीबाट मानिसमा सर्छ।
‘लोग्ने मान्छे भएर’ किन लजाउने !
सामान्य ठानिएको फ्लू खतरनाक हुन सक्छ
अमिताभ बच्चन, डेभिड बेक्ह्याम, जेशिका अल्बा लगायतका प्रसिद्ध व्यक्तिलाई भएको बाल दम रोगका विषयमा १२ प्रश्न